Ọkwa Solo - Gụọ Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Solo inwetaghachi nkezi 4.6 / 5 si 37
47th, o nwere 88.4K echiche
nke kacha mma,Anime kacha mma,nke kacha mma,webtoons kacha mma nke Korea,manhua kacha mma,manhwa kacha mma,romance kacha mma,webtoons kacha mma,bl webtoon,ụmụ nwoke hụrụ n'anya,chinhua manhua,webtoons emechara,webup nke ọma,mkpụrụ ego webtoon n'efu,ezigbo manhwa,ezigbo webtoons,eserese eserese,isekai,oge anime,ise manga,isekai pụtara,korean manwa,koreto webtoon,koreto webtoons,ìhè akwụkwọ,Light novel vs Manga,akara webtoon,manhua,Nwosu pụtara,manhu online,manhua na manhwa,manwa,manhwa na manga,anime mara mma,nwoke bl,ndụ manga,mmadụ online,mmanụ aṅụ,websaịtị,akwukwo,mmuta ohuru,mmelite ohuru,ndu manhwa,gụọ korean,gụọ manhua,gụọ manhwa,romance nwoke,webtoons ihunanya,gwa m okwu manhwa,tapas webtoon,n'elu manhua,elu manhwa,akwukwo anya,akwụkwọ akụkọ weebụ,ngwa webtoon,ihe eji eme ndi mmadu,mkpụrụ ego efu webtoon,webtoon korian,logo webtoon,webtoon,kedu akwụkwọ ọgụgụ ọkụ,gini bu manhwa
Action, Adventure, Manhua, Na-egosi
Nabata na weebụsaịtị anyị mara mma ebe ị nwere ike gụọ manhwa kasị mma, elu webtoon, na otutu manga efu.
Na-agụ Solo inwetaghachi, ọmarịcha manwa.
Ọ bụrụ na ị gụọ Manga na acho ichota ihe ohuru Manhwa or Manhua ma ọ bụ nanị dị nnọọ chọrọ lelee ụfọdụ kasị mma webtoons mgbe ahụ na nke a bụ na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Afọ 10 gara aga, mgbe "Ọnụ Ụzọ Ámá" nke jikọtara ụwa n'ezie na ụwa anụ ọhịa meghere, ụfọdụ ndị nkịtị, ndị mmadụ kwa ụbọchị natara ikike ịchụ nta anụ ọhịa n'ime ọnụ ụzọ ámá. A maara ha dị ka "Hunters". Agbanyeghị, ọ bụghị ndị dinta niile dị ike. Aha m bụ Sung Jin-Woo, onye E-rank Hunter. A bụ m onye ga-etinye ndụ ya n'ihe ize ndụ n'ime ụlọ mkpọrọ kacha dị ala, "Ndị Kachasị Ike Ụwa". N'enweghị nkà ọ bụla m ga-egosipụta, ọ na-esiri m ike inweta ego achọrọ site n'ịlụ ọgụ n'ụlọ mkpọrọ ndị dị ala… ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe m chọtara ụlọ mkpọrọ zoro ezo nke nwere ihe isi ike n'ime ụlọ mkpọrọ D-ọkwa! N'ikpeazụ, ka m na-anabata ọnwụ, enwetara m ike dị ịtụnanya na mberede, akwụkwọ ndekọ ọchịchọ nke naanị m nwere ike ịhụ, ihe nzuzo maka ịkwado elu nke naanị m maara! Ọ bụrụ na m zụọ ọzụzụ dịka ajụjụ m siri dị na anụ ọhịa ịchụ nta, ọkwa m ga-ebili. Na-agbanwe site na dinta na-adịghị ike gaa na dinta siri ike S-rank!
Soro Sung Jin-Woo ka ọ na-amalite njem nlegharị anya ka ọ bụrụ ịdị adị na-enweghị atụ site na sistemụ “Ọkwa-Elu” ya - naanị otu n'ụwa niile!
Abụ m naanị onye na-eto eto,
M na-ebuli elu naanị m,
Naanị m na-ebuli elu,
Onye Mere M Nwa Eze
Onye oma m n’agha n’agha
Abalị Na Emperor